Maitiro ekuisa chechitatu-bato kunyorera mu macOS Mojave | Ndinobva mac
Mushure memwedzi ingangoita mitatu yekuyedzwa nevekuvandudza uye vashandisi veveruzhinji beta chirongwa, vakomana veCupertino vakaburitsa vhezheni yekupedzisira yeMacOS Mojave, inoshanda sisitimu isingaenderane nemakomputa akafanana neiyo yapfuura vhezheni, sezvo iri chete inoenderana nemidziyo inogadzirwa kubva 2012.
Kwemakore matatu, Apple mukuyedza kwayo kugadzirisa kuchengetedzwa kweiyo desktop desktop system, uye nekudaro kumanikidza vashandisi kushandisa Mac App Store, haitenderi natively kubvumidza yechitatu-bato kunyorera kuiswa, nekubvisa iyo sarudzo yeiyo Security. uye zvakavanzika sarudzo. Neraki, kuburikidza neyakareruka Terminal rairo, tinogona kuratidza iyo sarudzo zvakare.
Nokuburitswa kweMacOS Sierra, Apple Izvo chete zvakatibvumidza isu kuti tiise zvinoshandiswa zvinowanika paMac App Store kana kubva kune vane mvumo vanogadzira. Iyo Anywhere sarudzo yaive yaenda. Kana iwe uchida kukwanisa kuisa chero kunyorera kubva kunze kweMac App Store uye iyo isina kugadzirwa nevakagadzwa vane mvumo, tinofanirwa kuenderera seinotevera.
Kutanga isu tinofanirwa kuwana Terminal, kuburikidza neLauncher kana nekudzvanya iyo Command + Space kiyi uye typing mubhokisi rekutsvaga Terminal.
Tevere, isu tinofanirwa kuisa inotevera kodhi sudo spctl -master-regedza
Ndokumbira utarise: Pamberi tenzi, kune mahedheni maviri (-), hapana. Tevere, isu tinonyora pasiwedhi yetimu yedu.
Tevere, isu tinofanirwa kutangazve iyo Tsvaga kuti shanduko dziitwe, kuburikidza nemirairo Killall Tsvaga
Takabva tasimudza musoro Zvido zvemaitiro.
Dzvanya pa Kuchengetedza uye Kuvanzika.
Pakupedzisira mukati yesarudzo Rega maapplication aburitswa kubva, sarudzo nyowani inofanirwa kuoneka Kwese, Sarudzo yatinofanira kusarudza kuti tikwanise kuisa yechitatu-bato kunyorera kubva kuInternet, kunyangwe kana mushambadzi asina kubvumidzwa neApple seyakavimbika.
Kana iyo Anywhere sarudzo isingaonekeIwe unongofanirwa kuita bvunzo nekuisa chishandiso chawaisakwanisa kare. Panguva iyoyo, macOS inotibvunza kana tichida kuiisa, ichitipa sarudzo yekuita kudaro (sarudzo isina kuoneka kare) kana nekusiyana, bvisa kumisikidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa yechitatu-bato maapplication pane macOS Mojave
Vicente Mañas akadaro
Hapana, zvese zvinoramba zvakafanana
Pindura Vicente Mañas
Mune mojave iyo inondibvumidza ... asi kana iwe ukavhara Sarudzo dzeSystem uye woivhura zvakare, inotangazve, ichinyangarika sarudzo yakaratidzwa
Marta Carvalho akadaro
Mhoro Ignacio, maita basa kwazvo !!
Inoshanda zvakakwana. Ini ndinoverenga nhanho dzandaifanira kutevedzera mumashure meidzo dzakatsanangurwa naIgnacio. Kamwe kana komputa yatanga patsva, iwe ukaedza kuvhura chirongwa ichi, unowana meseji ichiti Mac haigone kuivhura blah blah blah. Wobva waenda kuSecurity neKuvanzika uye inobvunza kana iwe uchida kuvhura. Kubva ipapo, ndizvozvo !! Ndokutenda zvikuru
Pindura kuna Marta Carvalho
Inoshanda zvakakwana muMojave !! ndatenda
Ndinoonga tsananguro dzako, asi ndanga ndichiedza zuva rese uye hapana, hapana nzira yandakagadziridzwa ku macOS Mojave 10.14.6 uye hapana kana chinhu, izvi zvakaitika kwandiri zvisati zvamboitika nevanotyaira samsung printer uye hapana izvozvi ine hp printer
Pindura kune vic
Spark email mutengi akagadziridzwa kutora mukana weizvo zvitsva muMacOS Mojave